Bathini ngamaphuphu ezikhova amasha | IOL Isolezwe
Bathini ngamaphuphu ezikhova amasha
Isolezwe / 8 November 2012, 11:14am / NQOBILE MASIMULA
5.9.2012 Gill Marcus Govener of the Reserrve Bank showing the new series of banknotes honouring former president Nelson Mandela to Winnie Madikizela Mandela. Picture: Etienne Creux
VOX pops Isithombe: DOCTOR NGCOBO
IMALI entsha Isithombe: DOCTOR NGCOBO
YAMUKELWE ngemibono ehlukene imali entsha engamaphepha enobuso bukaMengameli wokuqala wentando yabantu, uDkt Nelson Mandela, eqale ngoLwesibili ukusatshalaliselwa umphakathi.
Inobuso bukaMandela ngaphambili bese ngemuva iba nezithombe zezilwane ezinhlanu ezinkulu ezitholakala kuleli.
Izikhulu zebhange lombuso zithe kunezinto ezintathu okumele ziqashelwe ngabantu kule mali entsha: Ukubukeka kwayo, ukuyizwa ngeminwe, nokuyitshekisa.
Isolezwe like lehla lanyuka emigwqweni yaseThekwini lithola imibono yabantu ngale mali okuhloswe ngayo ukuhlonipha uMandela ngegalelo lakhe ekulweleni iNingizimu Afrika.
UMnuz Seaman Shange, waseSeaview, uthe kumele ngabe kade yenziwa le mali ngoba le yakuqala igcwele izilwane nokwenza kubukeke sengathi izwe liphethwe yizilwane. “Kuhle ukuthi ibe neqhawe elinguMandela ngoba uMengameli wethu wentando yabantu,” usho kanje.
UMnuz Muzi Mdakane, waseNewlands East, uthe: “Izosusa umsindo le mali ngoba nabanye oMengameli bazofuna kufakwe ubuso babo emalini kodwa ngaphandle kwalokho awukho umehluko otheni ngoba amandla ayo asafana.”
UNksz Linn Mathebula, waseBotanic Gardens, uthe yena akayithandisisi kahle ngenxa yephepha layo eliqinile kunaleli le mali ebivele ikhona. “Ngendlela egqame ngayo sengathi no-inki okubhalwe ngawo uyaphumela futhi nephepha akusilona leli esilijwayele,” kusho uNksz Mathebula.
UMnuz Nhlanhla Dladla, waseMlazi, uthe ngabe kungcono ukuba ayishintshwanga kakhulu kunalokho kufakwe isithombe sikaMandela kule mali ebivele ikhona. “Baningi abazozama ukukokotela le mali futhi indlela eyakhiwe ngayo iyathusa ngoba sengathi ngeyasemazweni anjengoZimbabwe,” kusho uDladla efa yinsini.
UNkk Smangele Mpungose, waseNtuzuma, uthe akukho okuhlukile kule mali, kuphela kwenziwe izinguquko lapha nalaphaya. “Vele izinguquko zihlezi zenzeka, nale mali kuzomele siyamukele ize ijwayeleke,” usho kanje.
UNksz Nosihle Shandu, wasehhostela labesifazane, iThokoza, usincome kakhulu isenzo sebhange Lombuso sokufaka ubuso bukaMandela kule mali engamaphepha. “Yinhle kakhulu, ikakhulukazi njengoba inesithombe sikaTata uMandela. Akekho phela ongazi ukuthi wasilwela ukuze sikhululeke, bekumele ahlonishwe ngalolu hlobo,” kusho le ntokazi.
Kuphinde kwaqwashiswa abantu ngezinto okumele baziqaphele ukuze baqinisekise ukuthi baphethe imali yangempela.
UMnuz Hlengani Mathebula oyisikhulu kwezokuxhumana kuleli bhange, uthe banxusa umphakathi ukuthi uzijwayeze nezimpawu zokuphepha zemali entsha ezosebenza kanye neyakudala.
“Sinesiqiniseko sokuthi konke kuzohamba ngendlela ngoba siqale ngokuwuqwashisa umphakathi ngaphambi kokuthi isatshalaliswe,” kusho uMathebula.
Uma uyiphakamisela ekukhanyeni le mali, kufanele ubone umfanekiso oyisithunzi sikaNelson Mandela ngakwesobunxele, kanti isilwane esingemuva kwemali sizobonakala njengophawu oluyi-see through uma usibheka ngaphambili.
Uma uyithinta ngeminwe kufanele uzwe ukuphakama phezu komfanekiso kaMandela, emagameni athi “ South African Reserve Bank, nasophawini lwe-Coat of Arms. Uma itshekiswa kufanele ubone umugqa wokuphepha oguqukayo ube ngumbala waleyo mali eyiphepha kanti u-inki okubhalwe ngawo inombolo yemali engu-R10 noR20 uyashintsha bese kuthi okubhalwe ngawo u-R50, R100, no-R200 wona ushintshe umbala oyi-spark.